စာအုပ်ကောက်နုတ်ထားပါတယ်ထလော့: 7:00 နံနက်. တက္ဏဗေဒ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ငါကိုအလွန်လေးစားတော်မူသောအသက်ကြီးသောသူနှင့်အတူစကားပြောခဲ့, ငါ၏အလူနေမှုပုံစံစတဲ့နှငျ့ဘုရားသခငျဂုဏျတငျအဘို့အကြှနျုပျ၏ဂိမ်းအစီအစဉ်ကိုရှင်းပြဖို့စိတ်လှုပ်ရှား, အထူးသညျငါ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်. ငါကအကြောင်းအေးဆေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစား, ဒါပေမယ့်၌ငါ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကျင်းပရန်အမြဲခက်ခဲခဲ့ပါတယ်. ထိုစကားရွံရှာဘွယ်သောရောနှောအရှိန်အဟုန်မှာငါ့လျှာမှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, ငါကသူငါဖြစ်သကဲ့သို့အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ်ခဲ့သောသဘောရတယ်. သူကတိတ်တဆိတ်နားထောငျဖို့ကြိုးစားနေခဲ့, သို့ရာတွင်သူ၏မျက်နှာစကားရပ်သည်သူ၏နှုတ်သည်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်မီကတုန့်ပြန်. သူကတစ်ဝက်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်တစ်ဝက်စိုးရိမ်ပုံရတယ်.
သူကငါ့ကိုရှုပ်ထွေးကြည့်ရှု ပေး. အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာမေးလျှင်, "အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအလေးအနက်ဘဝယူပြီးနေကြသည်, လုလင်တယောက်သည်? အဘယ်ကြောင့်သင်ျာအရာအားလုံးလုပ်ဖို့ဒီတော့ကြိုးစားနေပါတယ်? လူငယ်အခါသင်ရှုပ်ထွေးတက်တွေအများကြီးထိုအချိန်ကာလသည်အ, နှင့်အဆင်ပြေရဲ့. ရုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်မွေ့, အဲဒီအမှားကနေသင်ယူ, သငျသညျအဟောင်းတွေရသောအခါအလေးအနက်ရပါတယ်။ "
ငါအံ့အားခဲ့သည်. တချို့ကအဖြစ်လွတ်မြောက်နှင့်ရိုးသားကြောင်းအကြံဉာဏ်ကိုယူကြပြီစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုမှခံစားခဲ့ရပုံကိုမဖွင့်. ဒါဟာ constraining နှင့်လှညျ့စားခံစားခဲ့ရ. ငါကသူမှားခဲ့ဟုဆိုသည်သိ, ငါမူကားအသစ်တခုကိုခရစ်ယာန်ကြီးနဲ့ကျွန်မအတော်လေးစကားသည်သို့ကိုမထားနိုင်.
ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာသောအတွေ့အကြုံအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်, ဒါပေမဲ့အစားအကြှနျုပျ၏မီး dampening ၏, ငါကအပူကိုဖွင့်လှည့်စဉ်းစား. ငါအချိန်အများကြီးမသိခဲ့ပါ, ဒါပေမယ့်ငါမင့်ပတ်ပတ်လည်ထိုင်မစောင့်နိုင်ကိုသိ. ငါထရအသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်.
နှိုးနေ့တိုင်းငါ၏အနည်းဆုံးအကြိုက်ဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာငါအသစ်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူသစ်တစ်ခုနေ့ရက်ကိုတန်ဖိုးထားမမရဲ့, ဒါပေမယ့်အိပ်ရာထဲကရတဲ့ရုံဆွဲဆောင်ပုံရသည်ဘယ်တော့မှ. အစဉ်. ဒါကြောင့်ညအချိန်တွင်တကျိပ်တပါးသောင့်လိုက်တဲ့အခါ, အိပ်ရာအတွက်ရတဲ့ငါ့နေ့ပဲသာမန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သို့သော်ထိုသို့နံနက်ယံ၌ခုနစ်ခုဖွင့်သောအခါ, အိပ်ရာထဲမှာတည်းခိုအထီအနိုင်ရကဲ့သို့ဖြစ်၏.
သငျသညျအကြှနျုပျကို iPhone မှာကြည့်ရင်, သငျသညျသိမြင်ပါလိမ့်မယ်, ဝမ်းနည်းစွာ, ကိုယ့်ရှေ့တော်၌စတင်ဆယ်ငါးမိနစ်တိုးသတ်မှတ်အကြောင်းတဆယ်ခြောက်နှိုးစက်များ 7:00 နံနက်. အဘယ်ကြောင့်? ငါဆယ်သုံးနှိုးဆော်သံပြီးနောက်တက်ရလိမ့်မယ်မျှအခွင့်အလမ်းတော်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ကြောင့်,. သူများသည်လာမည့်သုံးဂဏန်းတိုင်အောင်တဆယ်လေး, တဆယ်, အမှန်တကယ်တစ်ရက်ရှိသည်ဖို့ငါ့အသာအခွင့်အလမ်းတဆယ်ခြောက်-များမှာ.
တခါတရံကျွန်မမနက်တိုင်းအဲဒီပထမဦးဆုံးငိုက်မိနစ်ဘာမှ၏ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်နိုင်ထင်. ဤသူကားငါ၏ကောလိပ်နှစ်တာကာလအတွင်း၎င်း၏အဆိုးဆုံးမှာ, နံနက်ယံ၌အိပ်ရာထဲကတက်ပြီးမည်သည့်ခြေထောက်မပါဘဲဧဝရက်တောင်တက်ပြီးတူခံစားခဲ့ရသည့်အခါ. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မုသာစကားကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြောပြနိုင်, ကဲ့သို့, "အင်း, သငျသညျအတနျးကိုသွားသင့်တယ်, ဒါပေမဲ့တကယ့်အရေးလိမ့်မည်?"သို့မဟုတ်" ငါသည်သင်တို့ကိုလွန်ခဲ့သောသုံးပတ်နှောင်းပိုင်းနေ့တိုင်းဖူးသိ, ဒါပေမဲ့အခြားသောနေ့ရက်ကိုအဘယျသို့င်?"သို့မဟုတ်" ဒီတစ်ခါလည်းငါ့မိတ်ဆွေငါ့အဘို့စမ်းသပ်ယူလိမ့်မည်. ဒါဟာအန္တရာယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ "ဝမ်းနည်း, ငါသိတယ်. ဒါကငါခေါ်ဘာ 7:00 နံနက်. တက္ဏဗေဒ.
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်သို့ပြောသည်အဆိုပါမုသားအိပ်ရာထဲမှာတည်းခိုငါ့အဘို့ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခဲ့သည်. တစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်ဦးအပိုဆောင်းငါးမိနစ်သို့မဟုတ်တစ်ဦးအပိုဆောင်းနာ​​ရီငါ့အသက်ကိုတိုးတက်စေမယ်လို့. ငါကျယ်ပြန့်နိုးတယ်အခါမိုက်မဲပုံရသည်, ဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းအဲဒီပထမဦးဆုံးအချိန်လေး၌ဿုံယုတ္တိပုံရသည်.
သူတို့ကတူခံစားခဲ့ရသည့်တိုင်အောင်သင်တို့ဘယ်သူမှထလျှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဘယျသို့စိတ်ကူးနိုင်သလား? စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများခေါက်မယ်လို့, ကျောင်းတွေခံစားမယ်လို့, အစိုးရအ ပို. ပင်ရှုပ်ထွေးနေသောကြောင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ထက်ဖြစ်လိမ့်မယ်. ဘယ်သူမှကောင်းစွာသူ့အလုပ်လုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ရှိသည်မယ်; လူတိုင်းနိုးအချိန်မှာ, တစ်ဝက်သောနေ့ရက်ကာလကိုလွန်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါအမှန်တရား, နေပါစေသင့်ငိုက်မှထမွောကျရန်ဆုံးဖြတ်ဘယျအခြိနျ, သင်နှင့်အတူလုပ်ကိုင်ဖို့နှစ်ဆယ်လေးနာရီသာရှိ. ထိုတစ်မှေးအိပ်ခလုတ်ကိုနှိပ်တကယ်သင်သည်မည်သည့်အပိုအချိန်မဝယ်ပါဘူး. သင့်ရဲ့အလုပ်ကိုယ့်ကိုပြုရမည်မဟုတ်.
ကံမကောင်းသဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုအများတို့သည်လည်းမွေးစားခဲ့ကြ 7:00 နံနက်. ဘဝတစ်လမ်းအဖြစ်ယုတ္တိဗေဒ. ကျနော်တို့အခြိနျဆှဲကတစ်ခါတစ်ရံတွင်မခေါ်. ကျနော်တို့ယခုအချိန်တွင်အတွက်တစ်ခုခုလုပ်နေတာနဲ့တူမခံစားရဘူး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာတိုင်အောင်ပယ်ရန်ဆုံးဖြတ်. တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသေးငယ်တဲ့အမှုအရာနှင့်အတူကပြုပါ, ထိုအမှိုက်ထုတ်ကိုယူပြီးတူ, တစ်ဦးစမ်းသပ်လေ့လာနေ, အလုပ်က e-mail ကိုဖွဆေို, သို့မဟုတ် Mom ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြန်လာသော.
သို့သော်အခြိနျဆှဲတကယ်တော့ဘာမှမဖြေရှင်းပေးဘူး, ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမိနစ်သည်အထိနေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုနှောင့်နှေးနေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးင်. ဒါဟာဘဝကိုယ်တိုင်ကနှောင့်နှေးတစ်ခုပင်ပိုမိုဆိုးရွားစိတ်ကူးင်.
ရဲ့ရိုးသားတဲ့ဖွစျပါစေ. သူတို့ဟောင်းနေသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုများသောအားဖြင့်လူထံမှအများကြီးမမျှော်လင့်ပါဘူး. (ငါဘယ်သူ့ကိုမှစော်ကားမိရှောင်ရှားနှငျ့သငျဟောင်းသတ်မှတ်ကြကုန်အံ့ပါလိမ့်မယ်။) အများအပြား၏အဆိုအရ, လူငယ်အလွန်ကြီးစွာသောတာဝန်သို့မဟုတ်မြော်လင့်သောအဘို့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး. သူတို့ကပြောပါ, "သင်ကသင်၏အသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်တာဝန်များ၏ထမ်းရွက်လိမ့်မယ်, သင်သည်တတ်နိုင်စဉ်ဒီတော့သင့်ရဲ့လူငယ်ပျော်မွေ့!ကျနော်တို့ကမှော်ရောက်ရှိသည်အထိ "လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်အသက်ရှည်သမျှယူမျှော်လင့်ဟန်, တာဝန်များ၏မတရားအသက်အရွယ်. ဒါကြောင့်တဆယ်ရှစ် Is? ဒါကြောင့်နှစ်သောင်းတစျဦးဖွစျသညျ? ဒါကြောင့်သုံးဆယ်ဖြစ်? သင့်ရဲ့ခန့်မှန်းသတ္တုတွင်းကဲ့သို့ကောင်း.
ငါရှည်လျားလွန်းလွန်ခဲ့တဲ့ Phoenix မြို့အတွက်တစ်ဦးစားပွဲထိုးတညဉ့်မနှင့်အတူစကားလက်ဆုံခဲ့. သူကကျွန်မကိုထက်အများကြီးအသက်ငယ်မဟုတ်ခဲ့, ဖြစ်နိုင်သည်သူ၏အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အတွက်. သူကငါထိုင်နေယခုအချိန်တွင်မှတကယ်ဖော်ရွေခဲ့, ကျနော်တို့အကောင်းတစ်ဦးစကားလက်ဆုံတက်အဆုံးသတ်. သူ့ကိုငါအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းသေးငယ်တဲ့-talk မှမေးခွန်းတွေကိုမေးခဲ့တယ်: သင်ဘယ်ကလဲ? အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသင်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ? သငျသညျအကြှနျုပျ၏အစာအတွက်တံတွေးထွေးပါလိမ့်မယ်?
ထိုသူသည်ငါ့မေးခွန်းတွေကိုတုံ့ပြန်အဖြစ်, ဒါကြောင့်သူကသို့ဝယ်ချင်ပါတယ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့သည် 7:00 နံနက်. တက္ဏဗေဒ. သူသာလအနည်းငယ်အဘို့အ Phoenix မြို့တှငျနထေိုငျခဲ့ကွောငျးပြောတယ်. အဲဒီအရင်ကသူနီဗားဒါး၌ရှိ၏, ကလီဖိုးနီးယားတို့ရှေ့မှာ, နှင့်မီကသူသည်အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်နေထိုင်ခဲ့. ဤအချက်မှာငါရဲပုံကြမ်းအနုပညာရှင်မှသူ့ကိုဖော်ပြဖို့င့်ကိုဘယ်လိုကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်းစတင်, ကိုယ့်အမှု၌သူအချို့မျိုးတစ်ရမ်းပြေးခဲ့.
သူ့ကိုငါမေးသော်အခါသူကပတ်ပတ်လည်အများကြီးပြောင်းရွေ့ဘယ်ကြောင့်, ဒီနေရာမှာသူကပြောတယ်ဘာ: "ဘာလို့လဲဆိုတော့. ငါတစ်နေရာတည်းတွင်ဆက်နေရန်လိုခငျြနှင့်တာဝန်တစည်းအပေါ်မယူကြဘူး. ကျနော်ငယ်ရယ်, လူကို. ကိုယ့်ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ငါ့အချိန်ဒါဟာင်, ကတိကဝတ်များတစည်းနှင့်အတူဆင်း bogged မရ. ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ "
ငါဝမ်းနည်းဖွယ်ခဲ့သော်လည်းသူ၏တုန့်ပြန်သဖြင့်အံ့အားသင့်စေမ. ၏သင်တန်းတွေအများကြီးသို့မဟုတ် Self-ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုရွေ့လျားမှားဘ​​ာမှမရှိဘူးင်, ဒါပေမဲ့ဘဝကယ့်ကိုအရေးမထားဘူးသောအခါဆယ်ကျော်သက်-ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်-သို့မဟုတ်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ရာသီလည်းမရှိ? ငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်မှုများအပေါ်ချွတ်ကိုင်သင့်ပါ, ကတိကဝတ်, နှင့်လေးနက်အကြာတွင်သည်အထိ?
ငါသီချင်းတစ်ပုဒ်ဿုံဒီရှုထောင့်ဖမ်းဆီးရမိသောအခြားနေ့ကကြားသိ. အဆိုပါ lyric သွားလေ၏, "ကျနော်တို့ကိုပျော်ရွှင်နေ, အခမဲ့, ရှုပ်ထွေးသည်, နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအထီးကျန်။ "
ငါတေလာဆွစ်ဖ်အပေါ်ယူပြီးလွန်ခဲ့သည့်အတွက်လူတို့အဘို့ကောင်းစွာမသွားဘဲဖြစ်ပါတယ်သိ (ငါ Kanye အကြောင်းသင့်သတိပေးဖို့လို?). ဒါပေမယ့်ငါကယ့်ပျော်စရာသီချင်းရဲ့သိအန္တရာယ်ကို ယူ. သူမ၏သီချင်း "22" တွင်မိန့်ဆနျးစစျဖို့ဆန္ဒရှိတာပါ, ဒါကြောင့်ငါက overanalyze ချင်ကြပါဘူး. သူမအောင်မြင်စွာသူမ၏နားထောငျသူမြား၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အသက်အရွယ်၏ဝိညာဉ်ကိုဖမ်းထားပြီးငါထင်. သို့သော်ထိုရှုထောင့်အားလုံးမှားသည်.
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ, သူမသီချင်းထဲမှာကပြောပါတယ်အဖြစ်, "နှစျဆယျနှစျဦးခံစားမိ" ရန်? အဆိုပါသီချင်းအပူအပင်ကင်းပြီးမျိုးကျင်းပ, အလင်း, ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောအကြောင်းအိပ်မက်မက်ကြောင်းနှင့်လွယ်ကူသောလူငယ်လူကြီး. ကံမကောင်းသဖြင့်, ဒါကြောင့်ဒီပျော်ရွှင်မှုနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရှုပ်ထွေးအတွက်တွေ့သောအကြံပြု, တခါတရံအလွန်ပင်ပန်းစေသောအလှည့်လည်. အဘယ်သူမျှမညှနျကွားခရှိပါတယ်, တာဝန်-ရုံမျှရှုပ်ထွေးနေသောပျော်စရာ. ထိုသို့ဖွင့် 7:00 နံနက်. နောက်တဖန်ယုတ္တိဗေဒ. အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုနှစျဆယျနှစျဦးခံစားမိလာသောအခါအသက်အဘို့အချိန်ရှိပါတယ်? ဆွစ်ဖ်ကဒီရှုထောင့်တက်စေဘဲ; ငါတို့သည်တဖန်ထပ်ခါထပ်ခါဒီယုတ္တိဗေဒကိုရောင်းချခဲ့ကြရတယ်. သို့သော်ထိုသို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်?
ဖြစ်စေမဒီ 7:00 နံနက်. ယုတ္တိဗေဒသစ္စာသည်သင်မည်သူပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နှင့်အဘယ်သို့သင့်အဘို့ဖန်ဆင်း. သငျသညျကိုသာ Self-စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ခံစားဖန်တီးကြသည်မှန်လျှင်, နောက်မှသည်အထိစစ်မှန်သောဘဝကိုချွတ်ချပြီးအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ. သငျသညျကိုယျအဘို့အခြားသူတစ်ဦးထက် ပို. ဘာမျှမထုတ်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်လူငယ်စားပွဲထိုးရဲ့ယုတ္တိဗေဒတော်တော်လေးသံကိုထင်ရစေခြင်းငှါ,. သငျသညျချင်တယ်ဆိုရင်သင်နိုးထဖို့အကြာတွင်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းနိုင်. ဒါပေမယ့်သင်ပိုမိုတစ်ခုခုဖန်တီးခဲ့ကြအဘယ်သို့လျှင်?
*ဒီခရီးစဉ်ရဲ့အသစ်စာအုပ်၏ပထမဦးဆုံးအခနျးတှငျမှကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်, တက်. မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်, အားဖြင့်အခါသင် Pre-အမိန့်ထ ဇန္နဝါရီလ 26, သငျသညျအခမဲ့အဘို့ဆုကျေးဇူးတော်အတစည်းရလိမ့်မယ်, အယ်လ်ဘမ်အပေါ်လုပ်မယ့်ဆုကြေးငွေလမ်းကြောင်းအပါအဝင်. ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုရွေးနှုတ်တော်မူဖို့အားလုံးကိုအသေးစိတ်များမှာ: http://risebook.tv/preorder
သော့ • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 1:18 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤအတွက်မစ္စတာခရီးစဉ် Lee က alot woow ကျေးဇူးတင်စကား… ငါအဘို့ဤဆုံးဖြတ်ချက်လုပ် 2015 ညစဉ်ညတိုင်းငါမှာနိုးထလိမ့်မည်3ဟုတ်မှန်အစဉ်မပြတ်ငါထို့နောက်ကိုယ့်ဖြစ်၏ထင်နိုးပေမယ့်ငါပုံမှန်အားဖြင့်ယခုနှစ်နေဆဲငါကလူနေဆဲပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပေးပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုငယ်ရွယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုကိုယ့်ကိုကိုယ်နှစ်သိမ့်ဆုတောငျးပါသေချာမဖြစ်ကြောင်းကို 20 သောအခါမနက်ငါ့ကိုစောင့်ဆိုင်းကြကုန်အံ့ 30 တစ်မိသားစု, ကလေးတွေ, အလုပ်နှင့်လင်ယောက်ျားထို့နောက်ငါအဘို့ဆုတောင်းကြလော့ဖို့ alot လိမျ့မညျ… ဒါပေမယ့်ငါတပြင်လုံးကိုစာအုပ်ရနိုင်ဆန္ဒရှိပုံကိုဒီအပိုင်းအစကျေးဇူးတင်လွန်းအလွန်သိကောင်းစရာများအသံ. .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုကောငျးကွီးပေး !! :-)
Yolanda Delacerda • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 1:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသူသည်ငါအခုအချိန်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူသည်လုံးဝဖြစ်ပါသည်! ဝမ်းနည်းစရာ, ဖုံးကွယ်ထားပေမယ့်မလိုအပ်. ငါတစ်ခုတည်း mom, ဖြစ်ကြောင်းကို, အချိန်ပြည့်ကျောင်းသား, သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပိုင်ဆိုင်, ကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလ၌စိုက်တဲ့အသင်းတော်ကိုလက်ရှိဝန်ထမ်းများခေါင်းဆောင် 2014 (ဝန်ထမ်းများကြွေးကျန်), လိင်လူကုန်ကူးမှု၏သားကောင်များဖြစ်ကြပြီးဟုတ်ကဲ့ပင်ငါအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ငါသည်သင်တို့ကိုပြီးသားကုန်နေတာသေချာဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူသည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦးဘေးကင်းလုံခြုံအိမ်မှာနှငျ့အလုပျအပိုငျးကိုအချိန်! ငါမှာအနည်းဆုံးအားဖြင့်နိုးဖို့အိပ်ရာမဝင်မီညတိုင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ဝံ့ 5:00 နံနက်. အပေါင်းတို့နှင့်ငါ၏အနှိုးစက် ထား. ..(သို့ဖြစ်. အဘယ်သို့ငါဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိကြောင်းတပေါ်ငါဆိုလိုဟုတ်ကဲ့အားလုံးငါးပါး)အစဉ်အမြဲရန် 5:45, 6:00, 6:15, 6:30, နှင့် 6:45…သငျသညျယနေ့ငါနိုးဘယျအခြိနျထင်ပါသလဲ?!? 7:00!!! ဟုတ်ကဲ့, ငါဒီလောက်အထိအပျင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိ… ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုငါငြီးငွေ့ဖြစ်ကြောင်းကို…အကြှနျုပျ၏ပန်းကန်ပေါ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွန်း, ဒါကြောင့်လဲကျနော်လက်ရှိအချို့သောအမှုအရာတို့ကိုခုတ်လှဲသွားပါ၏, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသင့်ရဲ့ post ကိုဒါမှန်သည်. ငါပါဝင်ပတ်သက်တာရာရာ၌လမ်းပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်မည်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငါသည်ဘုရားသခင်၏ဖို့ပိုအချိန်ပေးနိုင်တယ်လို့. ဘယ်လိုရီစရာတကယ်ထိုသို့သောအဖိုးတန်အချိန်ဖြုန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦးအဖြစ် 25 အသက် ... နှစ်( ငါဖြစ်၏ 25) သို့မဟုတ်ပင်တစ်ဦးအဖြစ် 30 သို့မဟုတ် 40 ကျနော်တို့တဦးတည်းရှိသည်ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူနေ့စဉ်နေထိုင်နေရပါမည်ဟောင်းတစ်နှစ်, ဖြုန်းမနေ့တိုင်းအသက်ရှင်ရန်နှင့်သူ၏စကားလုံးမျှဝေနှင့်ငါတို့နေ့တိုင်းဘဝအားဖြင့်ကိုယ်တော်၌ကြီးထွားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသမျှအခိုက်ကိုင်စွဲဖို့. Orlando တွင်မျှဝေနှင့်သင်တို့၏ဖျော်ဖြေပွဲမျှော်လင့်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!!
Mindy • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 1:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီ post ဟာပြီးပြည့်စုံသောအချိန်တွင်ရောက်လာသည်, အကြှနျုပျ၏နှစ်သစ်ရဲ့ resolution ကပိုပြီးစည်းကမ်းဖြစ်သကဲ့သို့, ပိုပြီးတိတိကျကျစောစောထနိုးနဲ့ငါ့အသက်ကိုအစဉ်မပြတ်ကြောင့်အသွင်ပြောင်းကြောင်းထို့ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်၌နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်. အားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
လိမ့်မည် • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 1:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခငျသညျကောငျး၏. လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်များတွင်ကျောင်းကအကြှနျုပျ၏အဘို့အပြန်ခင်5နှစ်အရွယ်သားနဲ့သူကအားလပ်ရက်များအတွက်မိမိအ mom, အတူဖြစ်ခြင်းမှအိမ်ပြန် (ပင်နွေရာသီ) နံနက်တိုင်းဟာသူ့ရဲ့ '' ငါနိုးထပါလိမ့်မယ် 20 မိနစ်,’ သို့မဟုတ်သမျှဆင်ခြေဆင်လက်ဖြစ်နှင့်တစ်မှေးအိပ် button ကိုထိမှန်စေခြင်းငှါ. ငါအလုပျအတှကျထကျ၌လူငါပြီးသားထဲကငါ့တစ်ခုလုံးကိုနေ့ကစီစဉ်ထားနှင့်ဤအပိုအိပ်ကိုကူညီလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပေမယ့်အစားအကူအညီထက်အိပ်ရာထဲမှာနေဖို့ငါ့ကိုထိခိုက်စေမယ်လို့တိုင်းတစ်ခုတည်းအချိန်ခဲ့သည်. တစ်တွေအများကြီးထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် 2014 ငါကျောက်ကိုအောက်ခြေမှာမကောင်းတဲ့ hit! ငါကထိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပဲကျေးဇူးတင်ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျ၏ဘဝပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြန်စဖို့နှင့်ဤမြေကြီးပေါ်မှာအကြှနျုပျအဘို့သူရှိပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာတွေ့မှအကြှနျုပျကိုမိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်နှင့်ကျေးဇူးတော်ပြတော်မူပြီပေါ့. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ငါတို့သခင်ကိုနားလည်အတွက် ပို. ပို. တသမတ်တည်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ရှင်သညျယရှေုကိုကပျင်းရိခြင်းကိုပြောပြအသက်ရှင်သောစကားလုံးဖြစ်ပါသည်, အိပ်, စသည်တို့ကို. အားလုံးဆင်းရဲမွဲတေမှုမှဦးဆောင်မည်, ကံမကောင်း, နှင့်ပင်သေဆုံးခြင်း. အပြစ်တရား၏အဖြေတွေအများကြီးငါ့အသက်ကိုအနှောငျ့နှင့်ပျင်းရိဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်, နည်းနည်းအပိုအိပ်ငါ့အဘို့ပြန်သညျဘုရားသခငျရှိပါတယ်အသက်ကိုမှငါ့ကိုကျင်းပပြီဆိုတော့. ယနေ့ခေတ်ငါနိုးထ 20 သို့မဟုတ် 30 မိနစ်အကြှနျုပျ၏နှိုးဆော်သံခင်နဲ့ကစကားသံကိုနားထောငျတျောရဲ့အစောပိုငျးစတင်ဖွင့်မရ '' ငါ့ကိုပြောပြ, သို့မဟုတ်ပင်အလုပ်မှာ 'ဤပယ်မထားကြဘူးယခုထိုသို့ပြု, သင့်ရဲ့သင်ပိုကောင်းလုပျနိုငျလုပ်နေတာအဘယျသို့သို့ပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတင်ထားရမည်။’ ငါရှည်လျားလွန်းသခင်ဘုရားအဘို့စစ်တိုက်ကြပါပြီငါသည်ငါ၏လမ်းအစောပိုင်းသင်္ချိုင်းတွင်း၌ငါ့ကိုထားသွားအမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်မြင်. ငါမဖြစ်ဘာလဲဆိုတာဘယ်မှာနေတုန်းပဲမရယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉျတျောထံသို့ပေးဖို့သငျယူခဲ့ကြရုံမျှမနေပါစေငါလုပ်ဖို့စီးပဲ့ကိုင်ခံရပါ၏အဘယျသို့နားထောငျကွသျောလညျးငါလူ့တာနဲ့ကျွန်မနောက်ကျောငါ့လမ်းကိုသွားဖို့နေတာဆိုတော့များ. ငါသည်ဘုရားသခင်ကဆင်းခွင့်ကိုကြောက်တာ, ငါသည်ငါ့ဖန်ဆင်းခြင်းသည်မိမိရည်ရွယ်ချက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မစဉ်းစားကြဘူး, အကယ်စင်စစ်ငါအခုအချိန်မှာယနေ့ပိုကောင်းလုပ်နေတာသို့မဟုတ်တာပါ, ဒါပေမယ့်ငါနေ့တိုင်းအားလုံးနေ့၌ဘုရားသခင်၏-ဆန္ဒရှိတသမတ်တည်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်အကြှနျုပျ၏စိတျအပိုငျးလုပျနိုငျ. ဖတ်ခြင်းနှင့်သင်ယူဒါပေမဲ့ယနေ့ငါတက် messed သောကွောငျ့အကြှနျုပျအဘို့ကငါသည်ဘုရားသခင်၏တသမတ်တည်းလိုလားအဘယ်သို့ပြုနိုင်ငါမနက်ဖြန် ya ဘုရားသခင်နှင့်အတူရလိမ့်မယ်နောက်ကျောကိုသွားစဉ်းစားရန်ကြောက်စရာခဲ့ရန်၎င်း၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာ. က Man ငါ့အဆွေငါစကားကိုနားထောငျငါပဲသငျသညျယခုတစ်ပါတ်ဘို့ခရီးစဉ်ကိုနားထောင်ပြီးစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်သင်ပြီးသားငါ့အသက်ကိုလူတစ်ဦး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြီကတိပေးအဘယျသို့ပြောင်းလဲပစ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကလွန်ခဲ့တဲ့ငါ့ကိုတွန်း. ငါကတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့် ya ပြောပြရုံကိုယ်ရောစိတ်ပါရှည် post ကိုအဘို့တောင်းပန်ပါကရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းကိုငါကဒီမှာအတူဂျော်ဂျီယာ၏ဤကြီးမားသောပြည်နယ်တစ်ခုတည်းဖခင်ဖြစ်ခြင်းအထီးကျန်ခံစားရသော်လည်းငါ၏အသက်သေခံတော်မူချက်မှထည့်သွင်းမယ့်အထက်သင့်ရဲ့ဂီတနှင့်ကောက်နုတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေ, ဘုရားသခငျသညျသူတို့လက်နက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်သင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်၌ငါ့ကိုခုတ်မောင်းဖို့ em တွေ့ဆုံရန်ဘယ်တော့မှရှိမရှိအခြားသူတွေမှတဆင့်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်.
Leonel Arce • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 2:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင့်ရဲ့တစ်ဦးပါရမီအနုပညာရှင်ငါ့ညီငါအမှနျထကျကိုကြည့် I'm25 ဖြစ်မယ့် 26 ဒီဒါနဲ့ဘုရားသခငျသညျသူ၏ဘုန်းနှင့်စည်းစိမ်များအတွက်အားကြီးသောလမ်းအတွက်ငါ့ကိုကိုအသုံးပြုသည်ပေါင်းကိုယ်မင်းကိုနှင့်အခြားအနုပညာရှင်ကဒါဘာသာရေးအသံမရှေးရှေးလှည့်သွားတတ်ကြ၏လမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းအတွက်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောဘူးဘာလုပ်ချင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်နိုင်ပါစေ ဒါပေမယ့်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်အသွင်ပြောင်းအဲဒီမှာအထဲကသူတွေကိုပြောပြကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းပြောတတ်ကြောင်းကိုအတွင်းစိတ်စကားသံကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပိုကောင်းဘို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်, ဘုရားသခငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှလိုလားခြင်းနှင့်လိုအပ်နေပါသည်သောအရာကိုပေါ်မှာငါတို့ရည်ရွယ်ချက်၏ရှာကြံငါတို့လိုရှိသူများရှိပါတယ်. ဤစာအုပ်ကိုအောင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြောင့်ရဖို့မစောင့်နိုင်ငါပြီးသားကကြိုက်နှစ်သက်မှစတင်တာ!
ယောလ • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 3:28 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
“သငျသညျအကြှနျုပျကို iPhone မှာကြည့်ရင်, သငျသညျသိမြင်ပါလိမ့်မယ်, ဝမ်းနည်းစွာ, ကိုယ့်ရှေ့တော်၌စတင်ဆယ်ငါးမိနစ်တိုးသတ်မှတ်အကြောင်းတဆယ်ခြောက်နှိုးစက်များ 7:00 နံနက်. အဘယ်ကြောင့်? ငါဆယ်သုံးနှိုးဆော်သံပြီးနောက်တက်ရလိမ့်မယ်မျှအခွင့်အလမ်းတော်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ကြောင့်,. သူများသည်လာမည့်သုံးဂဏန်းတိုင်အောင်တဆယ်လေး, တဆယ်, နှင့်အမှန်တကယ်တစ်ရက်ရှိသည်ဖို့ငါ့အသာအခွင့်အလမ်းတဆယ်ခြောက်-ဖြစ်ကြသည်။”
haha. တကယ်မှန်ပါတယ်. ငါတူပြဿနာရှိ. ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယ. ငါဖတ်နေစာအုပ်မျှော်လင့်တယ်!
ယောဟနျသ • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 4:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အားပေးခြင်း. ငါတစ်မှေးအိပ်ခလုတ်ကိုစေခြင်းငှါလည်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာ hit. ငါအကောင်းတစ်ဦးကိုဘုရားသခင်အားထောက်ပြတဲ့ဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်ချင်. ငါမကြာမီအစီအစဉ်တစ်ခုဆုတောင်းရနျလိုအပျ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, TL.
Holly Simpson • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 4:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကို! နားထောင်နေသည် & သဘောတူ & ရယ်မော. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Valentin • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 5:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤစာအုပ်ချင်. ဒါဟာငါ့အဘို့င် 18 မက်ဆီဒိုးနီးယားကနေအသက်အနှစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရက်ပ်.
ဟန္န • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 9:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီဒီတော့စစ်မှန်တဲ့နှင့်လေးနက်ဖြစ်ပါသည်. ယင်းနှင့်အတူရုန်းကန်နေခဲ့ကြ 7:00 အထူးသဖြင့်သူကအချိန်အတွက်နိုးထရန် ပို. ပင်ခက်ခဲဖြစ်လာသည်ရှိရာတက္ကသိုလ်ကိုစတင်ကတည်းက a.m ယုတ္တိဗေဒ.
သူ Carl • ဇန္နဝါရီလ 8, 2015 တွင် 10:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Melyssa • ဇန္နဝါရီလ 9, 2015 တွင် 3:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
im နောက်နေမဟုတ်, အခုဒါကြောင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားဒီဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်. ငါမစ်ရှင်လုပ်ဖို့တစ်နှစ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့အဆင်သင့်ရတဲ့နှင့်ယေရှုအကြောင်းလူတွေကိုပြောပြတာပါ, ဒါပေမယ့်ရက်ပေါင်းအခွင့်ကိုတက်ဦးဆောင် (ယခုမှသာသော 9,) ယင်း၌ငါ့ကိုအပြည့်အဝဖြစ်ရပြီ 7:00နံနက်ယုတ္တိဗေဒ. အရာဖြစ်ပါသည်, သော်လည်း, မနက်တိုင်းငါနိုးထကြဘူးနဲ့ကျွန်မသိပ်နောက်ကျလုံးဝအိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုတက်အဆုံးသတ်သောအခါ, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်မှာဒါစိတ်ဆိုးဖြစ်ကြောင်းကို! ငါဒီရှိကိုသိ 7:00နံနက်ယုတ္တိဗေဒ, ဒါပေမယ့်ငါကအဆင်ပြေဘူး. ကိုယ့်ကြောင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသော. ငါအမှန်တကယ်ကြိုးစားပြီးဘူးသည့်အခါသူကတောင်များကဲ့သို့ပုံရသည်, ငါနေဆဲကျရှုံး. ဒီရေးသားခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ခရီးစဉ်ကို. ငါစိန်ခေါ်နေပါတယ်.
BungansaPaul • ဇန္နဝါရီလ 9, 2015 တွင် 7:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး, ကိုယ်ကဒီ soo အများကြီးကိုချစ်. ကိုယ့်စာအုပ်ရနိုင်ဆန္ဒရှိ.
ဘရိုင်ယန်အန်သိုနီ • ဇန္နဝါရီလ 10, 2015 တွင် 2:24 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ချီးမွမ်းခြင်းကိုဘုရားသခငျသညျ! အသစ်ရဲ့စာအုပ်ဖတ်ရှုဖို့မစောင့်နိုင်သ… ငါမကြာသေးမီကအပေါ်တစ်ဦးနှလုံးအစားထိုးကုသခဲ့ 9/29/14, ငါကသူ့မင်္ဂလာပြုသောအဘို့ဘုရားသခငျသညျနေ့စဉျကျေးဇူးတင်ကြောင်း, ငါ၏အမှတ်, သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးစာအုပ်နဲ့တူ “သာယာတဲ့ဘဝ” ကျွန်တော်မှားအမှုအရာအတွက်ထားသို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်မှုလေ့ရှိပါတယ်။. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ! #Unashamed #116 #DontQuit #CantwaittoreadRise
Domeanica • ဇန္နဝါရီလ 12, 2015 တွင် 5:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ့ကိုအသစ်ရဲ့စာအုပ်ကနေဒီကောက်နုတ်ချက်သို့ငုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါသည်ဤကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအလင်းနှင့်ပင်စကားစတင်ပါလိမ့်မည်ယုံကြည်ကြဘူး. ကျနော်ကျိန်းသေအဖြစ်ကောင်းစွာဒီရိုးရိုးသားသားအမြင်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ဟုအချို့သောအငယ်ကခရစ်ယာန်တွေကိုသိရ. ဘုရားသခင့ကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်အလျှင်းဆုတောင်းပဌနာ, သို့သော်ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ.
Burton • ဇန္နဝါရီလ 12, 2015 တွင် 6:23 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Hmmm, 7:00 နံနက်ယုတ္တိဗေဒ… ငါသည်ဤကဲ့သို့အမရယ်ကျနော်မပြောနိုင်ပါဘူး! ဒီ Reading ငါ့ကိုကျောငါနိုးထသမျှသောကြိမ်မှထင်လုပ်, အချိန်ကိုကြည့်ပါ, ပြော, “6:00? ငါငါထားသောနေ့ပထမဦးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပါလိမ့်မည်ထင်… နောက်ကျောအိပ်စက်ခြင်းကိုသွား။” ငါသည်ငါ့အိပ်စက်ခြင်းကိုချစ်! စွဲမပြု, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုမနှောက်ယှက်ပါ. ကျွန်မအစားလို့ပြောသင့်ပါတယ်, “6:00? ငါငါထားသောနေ့ပထမဦးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။” သင်သည်ဤမျှဝေဘို့ခရီးစဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်. သင့်ရဲ့စာအုပ်အဘို့ဒီတော့စိတ်လှုပ်ရှား, ငါပြီးသားက Pre-အမိန့်ထုတ်တော့!
ယောရှု • ဇန္နဝါရီလ 13, 2015 တွင် 11:20 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အစွမ်းထက်ပစ္စည်းပစ္စယခရီးစဉ်. သခင်ဘုရားသည်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၌သင်တို့၏နှလုံးပေါ်တွင်တင်ခဲ့ရာမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအများအပြားမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေး.
Emmanuella ဂျိမ်း • ဇန္နဝါရီလ 29, 2017 တွင် 12:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ထိုသို့သောချစ်စရာကောင်းတဲ့ post ကို. ငါသည်သင်တို့၏ဂီတ၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောပန်ကာဖွစျပါ၏. ဒါဟာ soo အများကြီးငါ့ကိုမှုတ်သွင်း. သင်တစ်ဦးဘလော့ဂါများနှင့်စာရေးဆရာနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြောင်းထွက်ရှာဖွေခြင်းစိတ်ထဲ-မှုတ်ခဲ့, ငါနှစ်ဦးစလုံးရယ်နဲ့မှတက်ကြည့်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြပြီးကတည်းက. ငါတကယ်ငါသည်သင်တို့၏စာအုပ်မိတ္တူရနိုင်ဆန္ဒရှိ.
KenaMuigai • ဇွန်လ 16, 2018 တွင် 2:11 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေသင့်ရဲ့ဂီတကိုနားထောငျသူငါကချင်ပါတယ်ပြောတယ်. သေချာဘို့အကြှနျုပျ၏စိတျကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးနေသည်. သငျသညျကိုမှန်ကန်င်, ရိုးရိုးသားသားနှင့်သင်တို့နှင့်အတူရှိချုံအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမရိုက်နှက်မှုလုံးဝရှိမယ့်. သင်တို့သည်ဤမျှဤမျှလောက်ငါ့ကိုမှုတ်သွင်းင့်နဲ့ကျွန်မရယ်ပေမယ့် 18 ငါဘယ်နေရာမှာမယ်နဲ့တူခံစားမိ, ဤမျှလောက်အမှန်တရားရှိပါတယ် – ကုန်ကြမ်းရိုးသားမှု – သငျတို့သထံမှဘုရားသခငျ၏အစကားလုံးသို့ကြည့်မျှော်ငါမကောင်းတဲ့အလေ့အထတခုတစည်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဒါမှမှုတ်သွင်းခံများနှင့်လှုံ့ဆော်တာပါကြောင်း. Imma ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုရှိလာမယ့်နှင့်အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူမဟုတ်ရဲ့ကြောင်းကိုမျှော်လင့်ချက်ပေါ်ကိုတွယ်ကပ် 7:00 နံနက်. ငါလုံးဝဆက်စပ်နိုင်ပြီးဒါဟာကျွန်မအလုပ်လုပ်တော့တစ်ခုခုရဲ့ cuz ယုတ္တိဗေဒ. ကြေးဇူးတငျစကား!!
P.S. ပိုပြီးကြောက်မက်ဘွယ်ဂီတမျှော်လင့်! :)